Ndị na-emepụta mmanụ dị iche iche dị mkpa n'ụdị pụrụ iche | AromaEasy
Organic mkpa mmanụ nnukwu n'ùkwù | Na-azụ ahịa na ọnụahịa kachasị mma
Organic mkpa mmanụ buru ibu N'ogbe Mmeba ahụ ike gị. Kpoo ezi uche gị ma hụ uru dị iche iche na-enye ihe na-enye mmadụ ọgwụ.
Na ọtụtụ ọrụ na oge ịgba ọsọ. Ndị na-akwa ultrasonic anyị na-abịa n'ụdị dịgasị iche iche dị mma maka ihe ndozi ọ bụla. Chọọ mkpokọta anyị iji chọta onye mgbasa ozi kachasị mma maka gị.
Etu esi eji mmanu di nkpa na ultrasonic:
Tinye mmanu di nkpa
Mepee ma nwee ọ .ụ
Mmadụ Bịa ka kpọtụrụ anyị..
Igwefoto aromatherapy nke AromaEasy nwere otutu ejiji, ọnụahịa di ala. Na-arụ ọrụ nke ime ala. Nwee ezigbo igwe maka igwe ogwu AromaEasy® aromatherapy.
ndị na-emepụta mmanụ ahụ dị mkpa na ụdị dịgasị iche
pịa ebe a maka oke mmanu mmanu aromatherapy
AromaEasy® bụ ọkachamara kachasị n'ụwa na Aromatherapy. Icheiche na ihe ndi ozo aromatherapy, mmanu di nkpa na hemp. Ebumnuche anyị bụ ịmepụta ngwaahịa ndụ anaghị akwụ ụgwọ nke na-eme ka uche gị niile jupụta. Ahụ na ụlọ na ọnụ ala ọnụ. N'ụzọ dị otú a, ị ga-ahụkwu ahụ ike!
Ihe ndị dị mkpa mkpa mmanụ na-eme ka uche na ahụ gị dị ọhụrụ. Nwee obi ụtọ isi ma tinye ụdị na oghere gị na AromaEasy Diffusers. Anyị na-enye ọnụọgụ mgbasa dị iche iche kachasị ukwuu n'ahịa. Tinye oke nlezianya n'ime imewe. Na ịrụ ọrụ nke ihe nlereanya ọ bụla iji nye gị njirimara na anya ịchọrọ.
N ’ụwa niile, Mmanụ niile dị EsemokwuEe 100% dị ọcha na eke. Anyị kwenyere na iji naanị ọkwa kachasị elu. Usoro ọgwụgwọ dị mkpa na ụdị ọ bụla dị na GC / MS nke atọ nwalere maka ịdị ọcha na ihe mejupụtara. Nwee obi ụtọ anụrị na uru ọgwụgwọ dị na ngwaahịa dị iche iche.
Jiri ihe kachasị gị mkpa lezie anya. Nweta kwa ihe iji nyere gị aka na njem nke ahụ nke ọma. Anyị na-enye karama pan dị iche iche, akwụkwọ. Mejupụta oghere na ngwaọrụ ndozi iji nyere gị aka. Nweta ihe kachasị dị na ọdịiche dị na AromaEasy na mmanụ dị mkpa.